Montenegro zom-pirenen'ny efitrano fandraisam-bahiny MONTIS MOUNTAIN RESORT
Fananana efitrano fandraisam-bahiny + zom-pirenena Montenegro
MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid - trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 misy efitrano 238 dia haorina eo akaikin'ny tandavan-tendrombohitra any avaratry Montenegro, any amin'ny faritr'i Kolasin, miaraka amin'ny fanohanan'ny fandaharam-panjakana "Montenegrin Citizenship by Investment", izay anaovana izany Nahazoan-dàlana ny tetikasa tamin'ny septambra 2020.
Mifanaraka amin'ny fehezan-dalàna, ny fividianana efitrano (suite) ao amin'ny MONTIS MOUNTAIN RESORT amin'ny alàlan'ny Splendid amin'ny vidiny € 250 dia ahafahana mahazo ny zom-pirenenan'i Montenegrin (vola fanampiny) ho an'ny mpampiasa vola, ny vady aman-janany . Zava-dehibe ny manamarika fa ny mpampiasa vola dia tsy mampiasa vola amin'ny anjarany, fa amin'ny fananana ao amin'ny MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid, mividy efitrano (suite) manokana. Ankoatr'izay, ny fanaka dia tafiditra ao amin'ny vidiny.
MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid dia hotantanan'ny vondrona Splendid malaza, izay miantoka fiverenana haingana amin'ny tarehimarika ahazoana tombony tsara. Ankoatr'izay, ao amin'ny hotely SPLENDID 5 * any atsimon'i Montenegro dia azo atao ny mijanona maimaim-poana mandritra ny 1 herinandro isan-taona amin'ny taona voalohany aorian'ny famatsiam-bola.
Ary aorian'ny fahavitan'ny fanamboarana, iray volana isan-taona dia azo atao ny miaina ao amin'ny MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid, ary izany dia lavitra ny hany bonus ho an'ny mpampiasa vola amin'ity tetikasa ity.
Mividy efitrano (suite) ao amin'ny hotely MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid amin'ny vola € 250 na mihoatra dia ahafahanao mangataka ny zom-pirenenan'i Montenegrin (+ sarany fanampiny) ho an'ny mpampiasa vola, ny vadiny ary ny zanany miankina ara-bola.
Ny mpampiasa vola dia tsy mampiditra vola amin'ny ampahany, fa amin'ny fananana ao amin'ny MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid, mividy efitrano (suite) manokana.
Ny mpandrindra dia manolo-tena handoa 40% ny mpampiasa vola amin'ny efitrano isan-taona
Ny vidin'ny efitrano dia misy ny fanaka, ho vita amin'ny alàlan'ny drafitra mahazatra, mifototra amin'ny endrika anatiny novolavolaina
Tsy misy sarany amin'ny fikolokoloana ny trano sy tany, tsy toy ny tetikasa hafa izay manolotra fividianana ihany koa
Mandra-pahavitan'ny tetikasa amin'ny 2024, afaka miaina herinandro 1 isan-taona ny mpampiasa vola ao amin'ny hotely SPLENDID (atsimon'i Montenegro).
Rehefa vita - 1 volana isan-taona ao amin'ny MONTIS MOUNTAIN RESORT avy amin'i Splendid.
Raha ny fehezin'ny fifanarahana dia azo atao ny mivarotra ny efitrano (suite) afaka 5 taona.
Na mitahiry ny fampiasam-bola ary manohy mandray isan-jato ny tombom-barotra amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Kolasin dia toeram-pialofana kely iray izay miorina 73 km avaratry ny tanànan'i Podgorica eo ankavanan'ny Renirano Tara amin'ny haavo 960 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Manodidina ny tandavan-tendrombohitra telo no misy azy - Sinyavina, Komovy, Belasitsa.